Ministry of Agriculture - Journal "Nduku System"
Isi Label Ministry of Agriculture
Label: Ministry of Agriculture
Dabere na Roman Nekrasov, onye isi ngalaba na-emepụta ihe ọkụkụ, Mechanization, Chemicalization na Nchedo Osisi nke Ministri ahụ, ozi ahụ na-eme ihe iji kwado ọrụ itinye ego na ...
Owuwe ihe ubi nduku na Russian Federation na 2022 nwere ike itolite site na 6-7% ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ maka 2021. Gbasara ya ...
Na mpaghara Orenburg, ebe nchekwa 28 maka akwụkwọ nri na poteto ga-ejide ihe karịrị puku tọn 30.
Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ ugbo, ahia, nri na nhazi nke mpaghara Orenburg Sergey Balykin nwere nzukọ na mkpọsa ịgha mkpụrụ nke inine mepere emepe, ...
Multicopter bụ onye enyemaka kachasị mma na nhazi ubi
Na mpaghara Yaroslavl, ha malitere iji multicopter maka ịgbasa pesticides, fatịlaịza na ịgha mkpụrụ. Ụlọ ọrụ Agromir na-arụ ọrụ ugbo na-arụ ọrụ ụgbọ elu, ndị ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture na-akọ.
Ịgha mkpụrụ nke carrots na eyịm malitere na mpaghara Saratov
Ugbo akwukwo nri nke di na Engels district nke Saratov mpaghara aghawo hectare 10 nke akwukwo nri mbu - eyịm na karọt, ndi oru nta akuko nke Ministry of Agriculture Russia na-akọ. ...
Ihe ngosi "AgroComplex" mepere na Ufa
Ihe ngosi 32nd International Specialized Exhibition "AgroComplex - 2022" amalitela ọrụ ya na Ufa, ndị ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture of Russia na-akọ. N'afọ a ihe ngosi ...
Na mpaghara Bryansk ga-abawanye ebe maka poteto na-eto eto
Nzukọ nke ndị ọrụ ...
A na-emecha nkwadebe maka mkpọsa ịgha mkpụrụ n'oge opupu ihe ubi na mpaghara Nizhny Novgorod
Ugbo nke mpaghara na-akwadebe ihe mkpụrụ ma zụta fatịlaịza. A zụtalarị ihe karịrị 70% nke fatịlaịza ịnweta sitere na olu a haziri. Nkwanye mkpụrụ...
A tụlere atụmanya maka mmepe nke ụlọ ọrụ agro-industrial nke mpaghara Novgorod na nnọkọ n'etiti Minista Ọrụ Ugbo na Gọvanọ.
Minista ọrụ ugbo Dmitry Patrushev nwere nzukọ ọrụ na Gọvanọ nke mpaghara Novgorod Andrey Nikitin, ndị ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture Russia na-akọ. Ndị otu ahụ kwurịtara...
Ịgbanye ego maka ọrụ ubi oge na Russia mụbara site na 3%
Ministri Ọrụ Ugbo nke Russia na-eme nlekota mgbe niile n'ihe gbasara ịgbazinye ụlọ ọrụ agro-industrial nke obodo. Dabere na data arụmọrụ, ngụkọta ego mgbazinye ego enyere site na isi ...